Boldenone Undecylenate (Equipoise) Rohan'ny fitaovana (13103-34-9) | AASraw
Boldenone Undecylenate (Equipoise) Rohan'ny fitaovana
/ Products / Anabolika Steroids / Boldenone Powder Series / Boldenone Undecylenate (Equipoise) Rohan'ny hazo
4.33 avy amin'ny 5	miankina amin'ny 3 mpanjifa naoty
SKU: 13103-34-9. Sokajy: Boldenone Powder Series, Anabolika Steroids
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-manao manomboka amin'ny gram ka hatramin'ny baikon'ny mason'ny Boldenone Undecylenate (Equipoise) Rohmaterial Rohstoffe (13103-34-9), eo ambany fanaraha-maso CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Boldenone Undecylenate (Equipoise) horonantsary materiala horonan-tsary
Boldenone Undecylenate (Equipoise) Karazan-tsoratra fototra fototra
Name: Boldenone Undecylenate (Equipoise) Rohan'ny fitaovana
Formula Molecular: C30H44O3
Meny fitetezana 452.6
Melt Point: RT
Storage Temp: -20
Color: Volafotsy jaky
Boldenone Undecylenate Ny fampiasana fitaovam-pako amin'ny steroids
Ny fitaovam-piadiana Equipoise amin'ny ankapobeny dia antsoina hoe Bold U, BU, Equipoise Raw material, EQ avy amin'ny mpandidy body na tompon'ny UGL.
Boldenone Undecylenate Matetika dia fitaovana ampiasaina ho solika napetraka. Ao amin'ny tsena, misy 200mg / ml, 250mg / ml, 300mg / ml, ny sasany tamin'ny UGL dia nanao 350mg / ml sy 400mg / ml. Nefa, ho mafy loatra ny ho entina.
Boldenone Undecylenate Ny fitaovana fototra dia mitovy amin'ny hormone Dianabol, afa-tsy ny hormone Dianabol dia ampiasaina am-bava ary ahitana ny vondrona 17AA ary noho izany antony izany dia manana fiainana valo valo amin'ny valo. Ny fitaovana Rohin'ny fitaovana Equipoise dia tsy ahitana ny vondrona 17AA izay mahatonga an'i Dianabol ho toy ny faharetan'ny fotoana maharitra, ka mahatonga ny EQ hijanona ela kokoa ao amin'ny vatana ary hahatonga azy io ho tsara kokoa kokoa amin'ny fanorenana matevina sy tanjaka.
Boldenone Undecylenate Ny fitaovam-barotra, antsoina koa hoe EQ, dia ampiasain'ny bodybuilders sy ny atleta hampitomboana ny masin'izy ireo, hampitombo ny fiaretana sy ny famokarana sela mena amin'ny vatany izay manampy amin'ny fiaretana satria mitondra oksizenina ny sela mena ary raha manankarena ny ranao oksizenina, maharitra ela ianao mandritra ny fampihetseham-pandehanana mahery vaika. Boldenone Undecylenate Ny fitaovana elektronika, na ny EQ dia malaza amin'ny atleta, bodybuilders ary ny mpankafy ara-pahasalamana satria manome tombony miadana fa eo an-tampon'ny tampoka. Ireo faribolana ireo dia antsoina hoe fandrosoana EQ. Ny EQ dia azo ampiasaina amin'ny doses izay manomboka amin'ny 200mg ka hatramin'ny 600mg isan-kerinandro raha tsy mihoatra ny roa ambin'ny folo herinandro.
Fampitandremana amin'ny Boldenone Undecylenate Rohmaterial
Araka ny voalazan'ny olona maro, tsy tokony handray an'i Clen ianao raha mila herinandro maherin'ny herinandro 2. Izany dia satria mila fotoana ny famerenana ireo mpitsabo ary ny Clen dia tsy mahomby raha tsy miala sasatra, ary tsy misy antoka fa ny mpandray anao dia mitovy foana.
Na dia mijanona mandritra ny fotoana lava kokoa aza izy, dia aterina indray mandeha isan-kerinandro isan-kerinandro ny atody Equipoise Raw. Ny ankamaroany dia ampiasaina amin'ny dingan'ny 200-400mg (4-8 ml, 50mg version) isan-kerinandro ho an'ny lehilahy, 50-75 mg isan-kerinandro ho an'ny vehivavy. Raha toa ka ny doka 25mg no hany tokana azo alaina, dia mety ho tsy mahazo aina ny volam-borona. Ny fandaharam-potoana ara-pahasalamana dia azo zaraina bebe kokoa, angamba ny tsimok'aretina omena isan'andro mba hampihenana ny tsy fahampiana. Tokony hitandrina ihany koa ny olona iray mba hivezivezy matetika tsy tapaka, mba tsy hisorohana aretina na aretina. Tokony hampidirina amina tranokala iray be dia be ny volon'ny solika, ny plastika dia mety mitaky fandidiana. Mba hisorohana ny olana toy izany, ny atleta matetika dia mametra ny fizarana tsirairay amin'ny 3ml ary hampiasa indray ny tranonkala isaky ny isan-kerinandro, indrindra amin'ny herinandro hafa. Ny fitaovana elektronika vita amin'ny fitaovana elektronika dia mety mitaky ny fampiasana ny gluteus, fa koa ny fefy ivelany amin'ny tranokala fitsaboana. Mazava ho azy fa ny olana rehetra mifandraika amin'ny 25mg sy 50mg dia azo alaina amin'ny version 100 mg sy 200mg / ml io steroid io, izay manome ny mpampiasa manome fanafahana malalaka sy fampiononana.
Ny tsy fahampian-tsakafo matanjaka amin'ny fitaovana Equipoise Raw dia ny antsasaky ny androm-piainany, izay mety farafaharatsiny 12 andro. Izany dia miteraka vanim-potoana lava aorian 'ny famoahana farany izay tsy ampoavina avo lenta loatra ho an'ny anabolism tsara, na ambany tsy ampy mba hamelana indray ny fahasitranana. Ny vahaolana amin'ity olana ity dia ny fampiasana fitaovana Equipoise Raw ao anatin'ny ampahany vao haingana.
Ankoatry ny safidin'ny EQ amin'ny Dianabol, vao haingana ny fitaovana elektronika vita amin'ny Equipoise dia lasa malaza ary tia milina mpamokatra herinaratra. Ireo mpanazatra dia mandinika ny EQ ho toy ny fanoloana ho an'ny Deca Durabolin, tsotra fotsiny amin'ny hoe ny fahazoan'ny tanjaka sy ny kalitao nahazo vatana amin'ny EQ dia mitranga raha tsy misy ny vokatra mampidi-doza amin'ny Deca. Ankoatra izany, ny EQ dia misy fiantraikany eo amin'ny fivontosan'ny rà mandriaka ao amin'ny vatana, izay manome ny hozatry ny vatanao amin'ny fatran'ny ra mandriaka izay ilainy mandritra ny fotoam-pianarana mafana sy / na fampiofanana.
Tsy mpanao fanorenana haingana, fa kosa ny fitaovana Equipoise Raw dia hijery ny hahazoana tombony miadan-danja, miorina amin'ny kalitaon'ny kalitaona. Ny vokatra tsara indrindra amin'ity zava-mahadomelina ity dia hita rehefa ampiasaina mandritra ny fe-potoana lava, izay maharitra mihoatra noho ny 8-10 herinandro maharitra. Ny tazo azo raisina dia tsy tokony ho ny volom-bolo hita amin'ny androgens, fa tena voafaritra sy mafy orina. Koa satria ny ranomamy dia tsy mandray anjara betsaka amin'ny hamaroan'ny hozatra, ny ankabeazan'ny habeny azo avy amin'ny vanim-bolana amin'ny fitaovana Equipoise Raw dia azo atao rehefa tapitra ny fanafody. Mahaliana ny manamarika fa ny vatan'ny Equipoise Raw sy ny zava-mahazatra fanafody Dianabol dia saika mitovy. Amin'ny trangan'ny fitaovana Equipoise Raw dia ampiasaina ny lxNUMXbeta (undecylenate) lxNUMXbeta, raha Dianabol kosa dia 7 alpha alkylated. Ankoatra izany dia mitovy ny molekiola. Mazava ho azy fa manao zavatra hafa amin'ny vatana izy ireo, izay maneho ny fihetsika 17-methylation mihoatra noho ny fihenan-tsakafon'ny steroid.
Ity no testosteron fototra sy fitaovana elektronika vita amin'ny Equipoise Raw. Ny fitaovana elektronika vita amin'ny Equipoise dia ahafahana manome fanafody faran'izay ambany amin'ny testosterone, ary tsy manao sorona be loatra amin'ny fomban-drazana. Tokony hiorina amin'ny sehatra ity fananganana Estrogen ity, kanefa mbola tokony hahatratra ny tanjona ahafahana manampy azy amin'ny fampiroboroboana ny fanjakana anabolika. Fanombohana lehibe ny fanorenana tohatra. Cycle lehibe ho an'ny mpandidy rehetra amin'ny fambolena sy ny hafa izay te-hahazo tombony. Ny fiakaran'ny vokatra dia miteraka tombontsoa amin'ny fananana maodim-barotra maoderina.
Boldenone Undecylenate Rohanina
Ny EQ dia karazana fitaovam-pahadiovana. Min order 10grams / 10ml.
Boldenone Undecylenate fitaovana ara-tsakafo
Ahoana no hividianana Boldenone tsy mamerina ny fitaovana Rohena: mividy fitaovana fitaovana elektronika avy any AASraw
Ny AASraw dia manome ny fahadiovana 98% Boldenone Undecylenate / Equipoise volo volo ho an'ny mpanao biriky na laboratoara ambanin'ny tany noho ny fampiasana entona.
Sakafo Equipoise Raw:
10g Boldenone Undecylenate Rohin'ny ronono
Xylomplex Ethyl Oleate (EO)
Ny Oil Grapeseed 16ml (GSO)
Mln 12 ml
12g Boldenone Undecylenate Rohin'ny ronono
Boldenone Undecylenate: 8 Effective Side Effects You Want to Avoid
Equipoise (Boldenone Undecylenate Injection) Teknika Bulletin, pejy 1-9
Steroid Analysis, natontan'i Hugh LJ Makin, DB Gower, pejy 815-823
Fandinihan-tena ara-pahasalamana momba ny sisa tavela amin'ny fitsaboana tsy simika fanafody amin'ny alàlan'ny sakafo, nataon'i JackF. Kay, James D. MacNeil. Jian Wang, pejy 193
Boldenone cypionate poids
Fanondranana Nandrolone Decanoate (DECA)